Kooxda Chelsea oo isku diyaarineysa inay sameyso heshiis weyn bisha Janaayo – Gool FM
(London) 06 Dis 2019. Chelsea ayaa qarka u saaran inay sameyso heshiis weyn suuqa soo aadan ee furmi doono bisha Janaayo, haddii ay dhacdo in laga qaado xayiraada ay FIFA ka saartay dhanka suuqa kala iibsiga.
Sida laga soo xigtay wargeyska “The Sun”, Tababaraha reer England ee Frank Lampard, ayaa wuxuu kalsooni ku qabaa in kooxda Chelsea laga qaadi doono xayiraada ka saaran suuqa kala iibsiga ee ciyaartoyda, kahor inta aan la gaarin bisha Janaayo ee soo aadan.
Wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan in Frank Lampard uu weydiisan doono maamulka Chelsea in lagu xoojiyo safka kooxda weeraryahanka da’ada yar ee reer England una ciyaara naadiga Borussia Dortmund ee Jadon Sancho, kaasoo doonaya inuu tijaabiyo loolan cusub ee meel kale ah.
Wargeysyada qaar ayaa waxay horey u sheegeen in kooxda Borussia Dortmund ay diyaar u tahay iibinta Jadon Sancho suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee soo aadan, balse ay shuruud kaga dhigtay inay hesho dalab ku habboon ay ku fasixi karaan.
Heshiiskii ugu weynaa ee taariikhda kooxda Chelsea ayaa wuxuu ahaa saxiixa goolhaayaheeda reer Spain ee Kepa Arrizabalaga, kaasoo kaga soo dhaqaaqay naadiga Athletic Bilbao qiimo dhan 72 milyan ginni, waxayna u badan tahay in rikoorkaas la jabin doono haddii ay dhacdo in Jadon Sancho uu u soo dhaqaaqo garoonka Stamford Bridge
“Hazard waa Michael Jordan-ka kubadda cagta wuxuuna ku guuleysan doonaa Ballon d'Or”